Kumutswa kwaJesu Kunoita Kuti Vamwe Vawane Upenyu
Nharireyomurindi | March 2013
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Mizo Moore Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Oromo Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
KUMUTSWA kwaJesu haisi nyayawo zvayo yakaitika kare isinei nesu. Muapostora Pauro akaratidza kuti kumutswa kwaJesu kunokosha paakati: “Kristu akamutswa kuvakafa, icho chibereko chokutanga pane vaya vakarara murufu. Nokuti rufu zvaruripo nokuda kwomunhu, kumuka kwevakafa kuripowo nokuda kwomunhu. Nokuti vose zvavari kufa muna Adhamu, saizvozvowo vose vachaitwa vapenyu muna Kristu.”—1 VaKorinde 15:20-22.
Jesu akamutswa musi waNisani 16, 33 C.E., rinova ndiro zuva rokuti vaJudha vaienda kunopa zvibereko zvokutanga zvezvirimwa zvavo kuna Jehovha Mwari patemberi yaiva muJerusarema. Pauro paakati Jesu chibereko chokutanga, aireva kuti paizova nevamwe vaizomutswa kuvakafa.
Pauro akabva ataura mashoko anoratidza kubatsira kunoita kumutswa kwaJesu. Akati: “Nokuti rufu zvaruripo nokuda kwomunhu, kumuka kwevakafa kuripowo nokuda kwomunhu.” Takaberekwa tiine chivi chakabva kuna Adhamu ndokusaka tose tichifa. Zvisinei, paakapa muviri wake wakanga usina chivi sechibayiro, Jesu akaita kuti vanhu vakwanise kumutswa, zvichiita kuti vasunungurwe muuranda hwechivi nerufu. Pauro akapedzisa nyaya yacho zvakanaka pana VaRoma 6:23 achiti: “Mubayiro wechivi ndirwo rufu, asi chipo chinopiwa naMwari achishandisa Kristu Jesu Ishe wedu ndihwo upenyu husingaperi.”
Jesu pachake akatsanangura kubatsirwa kwatinoitwa norufu rwake nokumutswa kwake. Akati: “Mwanakomana womunhu anofanira kusimudzwa, kuti munhu wose anotenda maari ave noupenyu husingaperi. Nokuti Mwari akada nyika kwazvo zvokuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga, kuti munhu wose anotenda maari arege kuparadzwa asi ave noupenyu husingaperi.”—Johani 3:14-16.
Chimbofungidzira uchirarama nokusingaperi usingarwari, usingatamburi uye usina chinokushungurudza. (Zvakazarurwa 21:3, 4) Iyoyo itariro inofadza chaizvo! Imwe nyanzvi yakazvitaura ichiti: “Makuva anotiyeuchidza kuti upenyu hupfupi, asi kumutswa kwevakafa kunotiyeuchidza kuti rufu ruchapera nokukurumidza.” Chokwadi, kumutswa kwaJesu kunoita kuti vamwe vawane upenyu.
NYAYA IRI PAKAVHA Jesu Akamutswa Zvechokwadi Here?
NYAYA IRI PAKAVHA Kumutswa kwaJesu Kunoita Kuti Vamwe Vawane Upenyu
OUR READERS ASK Jesu Akavimbisa Mutadzi Kuti Aizorarama Kudenga Here?
NYAYA YEUPENYU “Ndaizviona, Asi Handina Kuzvinzwisisa”
SWEDERA PEDYO NAJEHOVHA “Murayiro Wokutanga Pane Yose Ndoupi?”
DZIDZISAI VANA VENYU Petro naAnaniyasi Vakanyepa—Tingadzidzei?
Zvapupu zvaJehovha vaKristu Here?
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI Kumutswa kwaJesu—Kunokubatsira Sei?
Kumutswa kwaJesu—Kunokubatsira Sei?
NHARIREYOMURINDI Kumutswa kwaJesu—Kunokubatsira Sei?